Guddida Doorashada Kenya Oo Mudeeyey Wakhtiga Lagu Dhawaaqayo Natiijada Rasmiga Ah Ee Doorashada Iyo Cabashada Mucaaridka |
Guddida Doorashada Kenya Oo Mudeeyey Wakhtiga Lagu Dhawaaqayo Natiijada Rasmiga Ah Ee Doorashada Iyo Cabashada Mucaaridka
Mar wax laga weeydiiyey eedeynta hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ee ah in la jabsaday habka electaroonika ee guddiga, kadibna lagu shubtey codadka ayaa waxa uu yifhi “Waan baadhi doonaa sheegashaadaasi, balse hadda waxbo kama odhan karo”.
Wasiirka Arimaha Gudaha Oo Hadlay
Wasiirka amniga guddaha Fred Matiang’I ayaa sheegey in aysan wali helin wax xog ah oo la xidhiidha rabshado ka dhashay doorashada, balse ay xaaladda u kuurgalayaan.
Mar sii horeysey musharaxa isbahaysiga NASA Raila Odinga ayaa diidey natiijada hor dhaca ah ee muujineysa in Uhuru Kenyata uu ku horeeyo 54% codadka oo la tiriyey 91% boqolkiiba.
Musharaxa madaxwaynanimada ee mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa ku gacan saydhay oo diiday natiijooyiinka hordhaca ah oo muujinaya in si wayn uu ugu horeeyo, madaxwaayne Uhuru Kenyatta.
Mr Odinga ayaa saxaafada u sheegay in natiijada ka soo baxaysa doorashada ay tahay”mid been abuur ah”,sababtoo ah buu yidhi lama keenin Documentiyo cadaynaya natiijada.
Sida ay muujinayaan tirooyinka kasoo baxaya xarunta dhexe ee natiijada guddiga doorashooyinka, illaa toban milyan iyo badh cod ayaa la tiriyey, waxayna labada musharax ee ugu muhiimsan kala heleen, Uhuru oo heysta 55% boqolkiiba, iyo Odinga oo heysta 44%. Guddiga doorashada ayaa ku booriyay shacabka inay ka dhowrsugaan natiijada kama dambeysta, waxaana welii guud ahaan dalka Kenya ka socda tirinta codadka doorashada.
“Safafka waxay ahaayeen kuwa la yaab leh ,xaqiiqadii Kenyanka aad ayay u soo baxeen si ay u codeeyaan,”.ayuu yidhi Kiraithe.